Linux Mint 20.3 ichave yakanzi "Una" | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint 20.3 ichave iine zita rekodhi re «Una» uye isu tichakwanisa kuirodha pasi kubva pawebhu nyowani yatovepo
Pave nemwedzi yakati wandei kubva ipapo zvakasimbiswa kuti, semakore apfuura, Linux Mint 20.3 yaizosvika yekisimusi. Yakanga iri nguva iyo Clament Lefebvre akatiudza kuti ivo vakatanga nekuvandudzika kwavo, uye mwedzi wakatevera takatanga kuziva zvimwe zvinhu, senge ivo vaive kugadzirira tweaks mune yako mushandisi interface. Masikati ano, mutungamiri wechikwata cheMint-flavored Linux operating system akatiudza chimwe chinhu, senge codename ichazoshandiswa neshanduro nyowani.
Linux Mint 20.3 ichave iine iyo codename ye 'Una'. Sezvo isu tatoenda kumberi muna Nyamavhuvhu, ichasvika yeKisimusi, uye ichazviita zvekare muCinnamon flavour (iyo huru), MATE neXfce. Ivo vari kushandawo paLMDE 5, iyo vhezheni yakavakirwa zvakanangana naDebian, iyo inoshandisa iyo codename "Elsie". Iyo yechishanu vhezheni yeLMDE ichave yakavakirwa pa Bullseye, ichaburitswa neCinnamon graphical nharaunda uye ichatsigira amd64 uye i386.
1 Linux Mint 20.3 ichauya zvakare yeKisimusi
2 Peji rewebhu ratopera
Linux Mint 20.3 ichauya zvakare yeKisimusi
Kana zviri zvimwe zvinhu zvitsva, Clem anoti vari kuenda kuzotarisa zvakanyanya pamufananidzo kuti vape iyo inoshanda sisitimu yemazuva ano. Semuenzaniso, ivo vanoda kuzviita mabara emusoro akakurisa, nemabhatani zvakare akakurisa kuti zvive zvinonakidza kuona uye nyore kudzvanya pane mamwe mapoinzi.
Imwe shanduko iyo vamwe vangangoda zvishoma ndeyekuti ichabvisa mamwe mavara kana madhimoni uye ivo vachawedzera imwe grey mumumvuri. Madiki majeti akaita senge anotsvedza, mabhokisi ekutarisa, masipanzi, uye bhatani rekuvhara zvicharamba zvichipa iwo wekusimbisa ruvara, nepo mamwe marongero acho achizotora nhanho kumashure uye otarisa kwazvakarerekera kupfuura pakutanga. Kune rimwe divi, ivo vanoramba vachishanda pakutsigira kunyorera kwetema tema.
Peji rewebhu ratopera
Chinhu chavakatiudzawo pamusoro pemwedzi yapfuura chaive iyo webhusaiti yavaive vachishandira. Clem anoti vatora nguva yakareba kudarika yaitarisirwa, asi mhedzisiro yakavagutsa. Inowanikwa mu Iyi link, tinogona kuona kuti zvese zvinotaridzika kunge zvemazuva ano, asi isu tinogona zvakare kuona, kana kusaona, zvichienderana nemaonero aunozvitarisa, kuti vabvisa kushambadza kuti vape pfungwa yakanyanya.
Saka kana Linux Mint 20.3 "Una" yasvika pairi yakagadzikana vhezheni, isu tinokwanisa kuikanda kubva kune iyo nyowani webhusaiti. Kuvandudzwa kana kufa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint 20.3 ichave iine zita rekodhi re «Una» uye isu tichakwanisa kuirodha pasi kubva pawebhu nyowani yatovepo
Edgar H. Fernandez akadaro
Ndanga ndichishandisa LinuxMint semuenzi wangu kweanenge makore manomwe kubasa, kumba, uye pakuenda.
Ini ndinogara ndichikurudzira uye kuyedza kubatsira avo vanoda kuzviedza.
Zvinosuruvarisa kuti webhusaiti yeLinuxMint ichiri muChirungu chete, ichi chipingaidzo chevatauri veSpanish uye nenzira iyi zvinoita kuti zviome kuparadzira OS. Ehe anogona kududzirwa asi fungidzira newbie uyo anongotaura / kuverenga Spanish kana chero mutauro uri.
Ini ndinowanzoona zvinyorwa zvako paTeregiramu. Makorokoto pane rako basa linuxadictos.com!
Pindura kuna Edgar H. Fernández
Ndatenda nekuunza nhau dzandinofarira distro, chimwe chinhu chakakosha chandinofanira kutaura ndechekuti dingindira razvino richasiiwa munzvimbo dzekuchengetera, nekuti chero munhu anoda kudzokera kune yapfuura anogona kuzviita, sezvavanotsanangura iwo dingindira ravari kugadzira inovandudza kusangana kwekuita kana kuti ivo vanoti ... ini handinyatso kuzvikurudzira asi hei ndichafanirwa kuzviedza kana zvapera, ini handizvivhare pane shanduko.
Iyo webhusaiti inotaridzika zvakanaka kwazvo, kunyangwe ini ndichisuwa iyo yapfuura, kubvisa chinyorwa ini ndinotarisira kuti chiri kubudirira ... kune yangu chikamu ini ndaifarira kupinda uye tinya pavari kuvabatsira $ Ini ndichiri kusiya goduckgo kana yahoo se yekutsvaga muFirefox kugadzira imwe purofiti nayo, uye pakupedzisira, zvakanaka kuti ivo vari kutoshanda paiyo nyowani lmde 5 Ndinovimba ichave yakanaka Kisimusi, kune tese tinofarira iyi minty distro: 3
Pablo Gaston Sanchez akadaro
Ndingadai ndakabheja kuti yaidaidzwa kunzi Ursula, vhezheni 20.3.
Pindura Pablo Gastón Sanchez
Fedora yakaziviswa se "dhijitari yeruzhinji yakanaka" neDPGA